Wararkii ugu dambeeyay dagaal beeleed ka socda Gobolka Hiiraan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Wararkii ugu dambeeyay dagaal beeleed ka socda Gobolka Hiiraan
Wararkii ugu dambeeyay dagaal beeleed ka socda Gobolka Hiiraan
Wararka laga helayo deegaano ka trsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in saaka Deegaanada Ceyr daye iyo miira jibaale oo ku yaalla xadka Gobolada Hiiraan & Galgaduud uu ka bilaawday dagaal culus oo u dhaxeeya laba maleeshiyo Beeleed.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay s sheegeen in dagaalka uu daba coday dagaal xalay ka dhacay deegaanada Ceyr Daye iyo Miira jibaale kaas oo sababay dhimashada 2 qof, iyo dhaawaca tiro kale.
Labada maleeshiyo beeleed ee dagaalamaya ayaa waxaa la sheegay inay yihiin dada xoolo dhaqato ah oo dhul isku heysto,kuwaas oo dagaalkooda uu yahay mid soo laab laabta,waxaana jirtay in dhowr jeer la sameeyay dadaalo lagu doonayay in lagu xaliyo balse aan lagu guuleysan.
Khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la soo sheegayaa in uu ka dhashay dagaalka Maanta,waxaana dadka deegaannada lagu dagaalamayo qaarkood ay sheegayaan inay weli maqlayaan rasaas ay isku ridayaan labada aleeshiyo beeleed.
Mas’uuliyiinta Maamulada Gobolada Hiiraan & Galgaduud weli kama hadlin dagaal beeleedka kasoo cusboonaaday deegaano u dhaxeeya Gobolada Hiiraan & Galgaduud ee Maamulada Hir-Shabelele iyo Galmudug.
Previous articleDhageyso:-Muxuu Madaxweyne Farmaajo ka yiri doorashada Soomaaliya?
Next articleSAWIRO:- Banaanbax lasoo abaabulay oo ka bilaawday Magaalada Muqdisho
Wasaaradda Caafimaadka oo shaacisay Dad horleh oo ka bogsaday COVID-19
Taabit Cabdi” Guddoomiye Mursal laba Arrin isma qabatee kala daaya”
DHAGEYSO: Warka Habeen ee Radio Risaala 15-07-2020
RW Kheyra oo kulamo gaar gaar ah ka wada Dhuusamareeb
Itoobiya oo xaqiijisay buuxinta biyo xireenka muranka badan dhaliyay
DHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 15-07-2020
DHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 15-07-2020
DHAGEYSO: Warka Habeen 14-7-2020
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID19 ku sheegtay inay Feyruska Karoona ay...